Cadaado oo 6 Musharax oo isugu soo haray Tartanka Madaxweynaha Galmudug * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Cadaado oo 6 Musharax oo isugu soo haray Tartanka Madaxweynaha Galmudug
By MAREEG	 On Jul 2, 2015
July 2 (Mareeg.com)— Waxaa la soo gaba gabeeyay khudbadaha Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Galmudug ay ka hor-jeedinayeen Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug, iyadoo lix musharax kaliya ay isugu soo hartay Tartanka Doorashada kadib markii Guddiga doorashada uu shaaciyay inay buuxiyeen shuruudihii loogaga baahnaa.
Inkastoo tirada musharaxiinta u taagneyd doorashada Madaxweynaha Galmudug ay intaas ka badnaayeen, hadana ma jirin cid ku dhawaaqday inay tanaasushay, waxaase muuqata in lagu kala harayba shuruudihii u horeeyay ee diiwaan gelinta musharaxiinta gudbinayay araajidooda ama codsiyadooda.
Lixda Musharax ee maanta ka hor jeediyay khudbadaha Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ayaa kala ah Axmed Cabdisalaan Xaaji Aadan, Axmed Macalin Fiqi, C/kariin Xuseen Guuleed, Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid) Xasan Maxamed Cilmi Afrax Mideeye iyo Xasan Maxamed Nuur Qalaad.
Musharaxiintan ayaa waxaa uu mid walba uu ka hor-sheegay Baarlamaanka Galmudug in haddii la doorto uu wax ka qaban doono arrimaha Gobollada Dhexe, gaar ahaan, amniga, dhaqaalaha, maamul wanaaga, dib u heshiisiinta iyo horumarinta, caafimaadka iyo waxbarashada.
Sidoo kale waxaa iyana khudbado ka jeediyay madasha illaa lix musharax oo u taagan xilka Madaxweyne kuxigeenka Maamulka Galmudug.
Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ayaa u codeeyay in doorashada Madaxweynaha ay noqoto mid hal dheeri ah, waxaana horay muran uu ka jiray in doorashada ay noqoto saddex meelood labo meelood, isla markaana maalinta sabtida ay u dhici doonto doorashada cod hal dheeri ah 50+1.
Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Galmudug ayaa wada loolankii ugu dambeeyay, iyadoo musharax walbana uu dadaal ugu jiro, sidii uu ku kasban lahaa Xildhibaanada Baarlamaanka ee codka siin doon.
Maalinta sabtida ee taariikha ku beegan 4-ta July ayuu qorshuhu yahay inay degmada Cadaado ka dhacdo doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka dowlad goboleedka Galmudug State.
Dhaq dhaqaaqyada siyaasadeed iyo ololaha xooga leh ee ka socda Cadaado ayaa ah mid aad isha looga haayo, waxaana magaalada ay tahay mid camiran oo ay isugu tageen dhamaan dadka daneeya arrimaha siyaasada, waxaana Hotelada iyo goobaha kale ay yihiin kuwo camiran oo aad u buuxda.
DEG DEG: AMISOM oo ka baxday Degmadda Qoryooley
Footbal:CECAFA) launched the 2015 CECAFA-Kagame Club Cup tournament in Dar, Tanzania,